आज देशभर थप १२१७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ? — Imandarmedia.com
आज देशभर थप १२१७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ?
काठमाडौँ । नेपालमा थप १,२१७ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीवार जनाएको छ। कुल ७,२३२ नमुनाको परीक्षण गर्दा त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
गत २४ घण्टाको अवधिमा नेपालमा १२ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म पुष्टि भएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,४५,६५० पुगेको छ।
अहिलेसम्म देशभरि १,६६३ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीवार पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये ७७४ पुरुष र ४४३ महिला रहेका छन्। तीमध्ये काठमाण्डूका ३२८ सहित ४०४ जना उपत्यकाका रहेका छन्।
हाल उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका छन् भने सङ्क्रमित नभएको जिल्ला मनाङ र डोल्पा हुन्। मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विवरण अनुसार विगत २४ घण्टाको अवधिमा थप १,०६४ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको उल्लेख छ।
अहिलेसम्म कुल २,३१,५०१ जना सङ्क्रमित निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। जुन ९४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर ५१५ जना क्वारन्टिनमा रहेका छन् भने १२,३८६ आइसोलेशनमा बसिरहेका छन्।
तीमध्ये ३०९ जना सघन उपचार कक्षमा र ५७ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित एकै दिन फेला परेका थिए।